KAOMININA ALAKAMISIKELY-ITASY : Hametraka fanamby goavana ny ben’ny tanàna vaovao
Sakana ho an’ny fampandrosoana ny kaominina ao amin’ny faritra Itasy ny faharatsian’ny lalana any an-toerana. 11 février 2020
Tafiditra ao anatin’ ireo kaominina mbola tratra aoriana noho io faharatsian-dalana io ny kaominina Ambanivohitra Alakamisikely, ao amin’ny Distrikan’ Arivonimamo na dia 27 km miala amin’ny lalam-pirenena voalohany monja aza. Ny fambolena sy ny fiompiana no seha-piharina anisany mampiavaka ny kaominina Ambanivohitra Alakamisikely. Tany lonaka no sady mamokatra, na dia ny tendrombohitra aza ety dia mamokatra avokoa, hoy ireo mponina. Tratra aoriana nefa izany kaominina izany raha oharina amin’ireo manodidina azy. Tsy misy ny lalana amoahana ny vokatra, manjaka ny tsy fandriampahalemana, ka miraviravy tanana ny tantsaha.
Noho izany indrindra dia nametraka fanamby ny ben’ny tanàna vaovao Randrianarisoa, lany tamin’ ny anaran’ny antoko MMM, fa tsy hikely soroka hametrahana ity kaominina ity amin’ny toerana tokony hisy azy. Tsy hivaona amin’ireo vina efa nampanantenaina ny mponina ny asa hotanterahina, toy ny fametrahana ny fitantanana mangarahara, ny ady amin’ny kolikoly, ny fanomezan-danja ny fahasalamam-bahoaka sy ny fampianarana, ny fametrahana ireo fotodrafitrasam-pampandrosoana mamaly ny filan’ny vahoaka eny ifotony.
Nanao antso ny ben’ny tanàna vavao, fa manokatra fiaraha-miasa amin’ny rehetra izy ireo rehefa misy tombontsoa ho an’ny kaominina sy ny mponina ao aminy, manokatra fiaraha-miasa amin’ny fitondram-panjakana foibe amin’ny fametrahana ireo fotodrafitrasam-pampandrosoana, manokatra fiaraha-miasa amin’ny zanaka am-pielezana mba hamelomaso ny tanindrazany, fa indrindra mifanome tanana sy miara-miasa akaiky amin’ny fokonolona ao aminy.
Anisany ho laharam-pahamehan’ny ben’ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy ny famahana ny sakan’ny fampandrosoana, ka ho vaindohan-draharaha ny fanetsehana ny tantsaha hamokatra betsaka kokoa sy amin’ny kalitao tsara kokoa, amin’ny alalan’ny fampiofanana azy ireo. Ny faran’ny herinandro teo moa no vita ny fifamindram-pahefana teo amin’ny PDS teo aloha sy ny Ben’ny tanàna vaovao. Nandray ny asany avy hatrany ity farany taorian’izay.